Mourinho oo markii ugu horreysay ka hadlay wararka Gareth Bale la xiriirinaya Tottenham – Gool FM
(London) 16 Sebt 2020. Tababaraha kooxda Tottenham Hotspur ee José Mourinho ayaa ka hadlay wararka Spurs-ka la xiriirinaya inay ku dhowdahay saxiixa xiddiga reer Weles iyo naadiga Real Madrid ee Gareth Bale.
Gareth Bale ayaa si xoogan loola xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda Real Madrid inta lagu jiro suuqan xagaaga, maadaama la fahansan yahay inuu si toos ah kaga baxay qorshaha tababare Zinedine Zidane ee Los Blancos.
Wakiilka Gareth Bale ee Jonathan Barnett ayaa xaqiijiyay in laacibka reer Weles inuu ka tagayo Real Madrid isla markaana uu doonayo inuu ku laabto Tottenham.
Haddaba sida laga soo xigtay shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay José Mourinho, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Gareth Bale waa ciyaaryahan ka tirsan Real Madrid, waana in la ixtiraamo taas, mana ka hadlayo ciyaaryahan ka baxsan kooxdeyda, kama hadli karo taas”.
“Shaqadayda ma ahan inaan xiriiro la sameeyo wakiillada ciyaartoyda”.
“Waxaan isku dayay in aan la soo saxiixdo isaga markii aan joogay Real Madrid, taasoo aheyd waxaan suurtogal aheyn in la sameeyo intii aan halkaas joogay”.
“Laakiin madaxweynaha Florentino Perez ayaa raacay dareenkayga iyo xilli ciyaareedkii aan kaga soo tagay Real Madrid, isaga ayaana la soo saxiixday”.
“Sir ma ahan arrinta ku saabsan inaan jeclahay Gareth Bale, waxaan u maleynayaa inuu Bale ogyahay taas sidoo kale”.